aruminiyamu magaba ekuti zvishandiswezve | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
aluminium cans kushandiswa kwevira
Aluminium Zvimedu Zvokugadzirisa Zvishandise Kugadzirisa Kuita uye Nzira
Aluminium Zvimedu Zvokudya Zvokudya Zvokugadzirisa Kunyorera ndiyo nzira inogadziriswa zvigadzirwa zvealuminium inogona kushandiswa zvakare mune zvigadzirwa mushure mekutanga kwayo kugadzirwa. Izvi zvinosanganisira kugadzirisa zvakare simbi, iyo inodhura zvishoma uye ine simba-kudarika kuumba saruminium itsva kuburikidza ne electrolysis ya aluminium oxide (Al2O3), iyo inofanira kutanga inotungidzwa kubva kuaireite ore uye yakanatswa kushandiswa kweBayer. Kudzokorora zvinyorwa zvealuminium zvinongoda chete 5% yemasimba anoshandiswa kugadzira aluminium itsva kubva mumvura yakaoma. Nokuda kwechikonzero ichi, anenge 36% yea aluminium yose yakabudiswa muUnited States inobva kumarara akareruka zvakare. Kushandisa zvimiti zvinokonzerwa newaini inoshandiswa pakugadzirwa kwealuminium, uye yakawanda yacho inogadzirwa zvakare mualuminium cans.
HLQ Induction Equipment Co inopa chinotungamirira Aluminium Zvimedu Zvokudya Zvokudya Zvokudya Zvokugadzirisa Kusvuta Chivako yekugadzirisazve aluminium Zvinyorwa / makana / ingots uye marara emuchengetedzwa emashini aluminium zvakare.
A Aluminium scraps / ingots / makanasi anodzokorora tanini inotora inogadzirwa nealuminium nhengo kana aluminium ingot / zvimedu semutengo mukoti inotungunuka yakagadziriswa tirayumu uye inotanga tanotanga kutanga kunyauka. Kuwedzera mamwe aluminium kutengesa iyi nzira inokurudzirwa sekuti altenumini yakanyungudutswa inopisa kupisa kwakanyanya.
Apo kutonhora kwealuminium kunosvika ku1220.66 ° F kunoshanduka kuva mvura. Zvose zvakasara kubva pakucheka uye kupendeka kubva kumakani zvichamhanyira pamusoro. Izvi zvinotumidzwa marara uye zvinogona kugadziriswa nesimbi yesimbi. Izvi zvinoda kupora zvisati zvagona kuregwa zvakachengeteka.
Zvadaro, the crucible (furna) ichadurura pure aluminium. Kazhinji, Hydraulic tilting mechanism inowedzera kudira yakawanda yemidziyo yewaini.
Pakupedzisira, zvine hanya, iyo yakanyungudutswa yealuminium ichadururirwa muhuni kuti inotonhorera pasi uye yobva yasara kuti ishandiswe.
Advantages of induction aluminium zvinyorwa zvinodzokorora tanhi:
1, shandisa simba uye kuderedza kutonhora kwezvakatipoteredza
Dhiyabhorosi yokutanga tanhoku musangano pamusoro pekusvibiswa, asiwo pipeline yemauto anobatsira, mukati nekunze kwehuni yehuni ine nhamba yakawanda yekugoverwa mumusangano, zvichiita kuti pave nekushanda kwekushanda semusangano. Saizvozvowo chivako chekutanga chekutanga, kupukunyuka kwakanyanya kumhepo, kune kupisa kwekupisa kwekushisa, kugadzirwa kwesimba guru rekushandisa, kuwedzera mari yekugadzirwa. Panguva imwecheteyo, kutonhora kwemazuva kunowedzera. Iko kushandiswa kwemagetsi ekugadzirisa kupisa, iyo inopisa inoshandisa magnetic field heat, kuitira kuti kuderedzwa kurasikirwa kwekushisa kunotyisa, kupisa nekukurumidza, kunyauka nekukurumidza, nokudaro kuderedza kushandiswa kwesimba. Deredza kushandiswa kwemagetsi. Mushure mekuenzanisa kwekuedzwa kwekuedza nekugadziriswa, simba rekuponesa simba ndi20% -40%.
2, kupisa nekukurumidza, kupisa kwekushisa kwakarurama chaizvo-nguva
Electromagnetic induction heat nzira ndeyemagnetic field lines rinotisa kupisa kutsva, kupisa kunononoka kweAluminum Alloy. Kudzora kwekushisa ndeyechokwadi-nguva uye yakarurama, iyo inovandudza hutano hwechigadzirwa uye inovandudza kushanda kwekugadzira!
3 uye upenyu hurefu hwebasa, kushandiswa nyore
Izvo zvemagetsi zvinokonzera kupisa mukati mehuni inopisa nzira ndeyokushandisa kushandiswa kwetambo kupisa, kushandiswa kwetambo munzvimbo yakakwirira yekutonhorera kwenguva yakareba mukushandiswa kwesimbi inokonzera kuderedza hupenyu hwaro hwekushandira, kukwirira kwekugadzirisa mari. I-electromagnetic Heating coil inogadzirwa nezvinhu zvinodzivirira uye firiji yepamusoro, naizvozvo upenyu hwebasa hurefu uye husina kuchengetedzwa.
Electromagnetic induction heat with the development and development of the technology, process production and technology of components, software, such as protection of the power current can be 2-200KW.
Nzira yekushandisa iyo inoshandisa magetsi ekugadziriswa kwemagetsi, izvo zvingaderedza kushambidzika kwemhepo yemuchina, uye muviri wevanhu unogona kugadziriswa zvakachengeteka, kuitira kuti kudzivisa kuitika kwekutsva uye kupisa njodzi dzinokonzerwa netsika yekudziya yemhepo uye kuchengetedza kuchengetedzwa kwemagetsi yevashandi.
1 simba rekuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza, ekushandisa emagetsi eGGBT eGerman, kuvimbika kwakanyanya, kushanda kwakadzikama uye nemitengo yakaderera yekugadzirisa.
2) kuwandisa kwechidimbu chechidimbu chakavhara loop tracking, automatic load impedance matching.
3 simba rakavharwa-loop control, kudzivisa kushanduka kwekushisa kunokonzerwa nesimba pasi.
4) pamusoro pemhepo, pasi pemhepo, kusakwana kwechikamu, pamusoro pemazuva ano, pamusoro pekudzivirira kwemazuva, kuratidzwa kwemazuva chaiwo emiganhu, kukanganiswa kwemaitiro uye alarm; kuvuza kuvhara kweawa, kugura simba uye simba rekushanda kwemazuva chaiwo.
5) PID kupisa kwemazuva ekushisa, kushandiswa kwekushisa kwekushisa, kudzivirira kusungurudzika kwealuminium kutengesa kunopisa, kupisa zvishoma, maitiro akafanana esimbi kushandura chikwata chekudzidzira chibereko.
6 (LED) yemagetsi yekushisa mutevedzeri, kuenzanisa nekudzora kutarisa kwekushisa kwepamusoro kune 3 degrees centigrade, hutyu hwealuminium soup hwakanaka, kupisa kunoputika kunokurumidza kukurumidza, kutonhora kwevira kunotadza kudzora, kukwanisa kwekugadzira kuri kukwirira;
7) iyo yakakosha sarudzo yepolycrystalline mullite fiber yevira, zviduku zvinyorwa, zvakanaka kudzivirira pfuma, kushandiswa kwemhepo shoma, kushanda kwakakwana, kutonhora kupfuura 1200 degrees, hupenyu hurefu hwebasa;
8. Kuvhima iri nyore uye simba rinogona kugadziriswa nebasa;
9 (100%) kutakura kwemazuva, simba guru, kuvimbisa kushanda kwemaawa 24.
Kunyorera simba re SMJD rhepfenyuro yemagetsi aluminium zvinyorwa zvinoshandiswa zvekutsvaga moto wevira:
mhando chiyamuro Power Kunyorera Unyanzvi Max Temperature
simbi, simbi isina tsvina mhangura, ndarama, sirivha (zvimedu, Slag) aluminium, aluminium alloy,
Aluminium chakare, Aluminium slag, pop anogona
[pdf-embedder url = "https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/10/SMJD-melting-aluminum-furnace-parameter.pdf" title = "SMJD inonyungudutsa aluminium moto paramende"]
Categories Technologies Tags aluminium cans kudzokorora, aluminium cans kushandiswa kwevira, aluminium inoshandiswa kuchinja zvakare, aluminium ingots kudzokorora, aluminium recycling melting, aluminium zvimedu zvinoputika, aluminium zvinyorwa zvinodzokorora zvakare, aluminium zvinyorwa zvinodzokorora tanhi, aluminium zvinyorwa zvinodzokorora zvakare, aluminium cans kudzokorora, aluminium cans kushandiswa kwevira, aluminium recycling furnace, aluminium zvinyorwa uye kushandiswa kwemarara, aluminium zvinyorwa zvinodzokorora zvakare